War Deg Deg Ah:- Dagaal Culus Oo Ka Qarxay Deegaanka Sool joogto – Codka, shacabka, SSC, wararkii ugu dambeeyey
War Deg Deg Ah:- Dagaal Culus Oo Ka Qarxay Deegaanka Sool joogto
Buuhoodle(Allssc): Wararka haatan kasoo baxaya jiidaha hore ee Deegaanada Sool joogto iyo Kalshaale oo ay halkaasi hore dagaalo culus ay ku dhexmareen Ciidamada Maamulka Khaatumo ee xaqu dirirka ah iyo Malayshiyaadka SNM ee duulaanka ku ah Deegaanada Khaatumo state.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in Dagaalkani yahay mid xoogan isla mar ahaan taana gurxanka rasaasta waa weyn laga Maqlayo Magaalada Buuhoodle iyo Deegaano kale. Sarkaal sare oo ka tirsan Ciidamada Xaqu dirirka ah ee Dagaalka kula jira Jabhada SNM ayaa sheegay In dagaalku yahay mid xoogan isla markaasna ay soo qaadeen Maleeshiyada SNM ee uu hogaamiyo Siilaanyo.
Dagaalkan ayaa hada ka socda jiidaha hore iyadoona la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ilaa hada lagama war hayo qasaaraha rasmigaa ee dagaalkani gaystay.
Hadaba waxaa naga xusuusin ah akhristayaal in wixii kasoo baxa dagaalkani wararka dambe idiinku soo gudbin doono.
Allssc.com/Codka shacabka Khaatumo
June 9, 2012 at 7:50 pm -
waar arinkan bilee labada maamul u soo tashadeen khaatumo halka kalena waynakan ogee dhaqdhaqaaqa ka socda tulada tuka raq
June 9, 2012 at 9:10 pm -
waxaan qabaa anigu hadii isaaq&marjeeteen isugu keen tagaan waxba inaga qaadi maayaan sabab too ah ciidu waa ciideenii ciida ayaana hiili nasa ilaahayna waakala arkaa xaqa & baadilka qofkasta ooinaga mid ah waxaa saaran masuuliyad qaran kiimuruqku hal gamilahaa &kii xoolo kuhalgami lahaa&kiilacag kuhalgami lahaa &kii dar dargalin ku halgami lahaaba maanta idhi hiisu wax waa arkaan
June 9, 2012 at 9:13 pm -
labada maamulba wayubeegtoomaan mujaahidiinta khaatumostayt ofsoomaalia waxaanuleenahay guulaysta
June 9, 2012 at 9:31 pm -
idoorow jab ilaah baan idiin baryee jaba jab jab oo gaber idinkam harto dulmigaad wadaan ilaah ha idinku jebiyo amiim amiin amiin
June 9, 2012 at 9:32 pm -
geesiyaasha khaatumo guuleysata guuleysta ilaah baa idinla jira inasha alaah guul guul guul
June 10, 2012 at 9:36 am -
waxaasi waxba kama qaadayaan wiilasha Buuhoodle ee caan baxay, waan ku kalsoonahay dhankaa iidoor-ka bal gaadiid xardhan nooga keena.
shanka Garowe haka baqina meelahaas ma soo dhaafi karaan, hadii ay ka dhabeeyaanna rag waaweyn ha u dirina ee caruur-ta marka dugsiyada laga soo fasaxo u dira, ayagaa cararaya oo dhahaya al-shabaab ayaa nasoo cayrsadaye. kkkk
June 10, 2012 at 10:03 am -
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk dhulbahante dad waalan waar dhulkana waa la idin kala wareegayaa hantidana idoorba iska leh dumarkiinana waa lo saraynayaa
June 10, 2012 at 10:12 am -
Allahu akbar ciidama khatumo guul ayay ka hooyeen dagaalka ninkii ogbaa og. idoor iyo dhabayacadaba waa u jilib dhigayna
June 10, 2012 at 12:34 pm -
khaatumo state hanoolato insha allah
June 10, 2012 at 12:48 pm -
waxaa xigi doonta waanla xasooqay iyo dadba lanaga qafaashay
hadaanay khaatumo seeg waalnayn maxaa dad intii u xigtay ku dhaqaajiye.la garay idoor oo waxaad ku necebtihiin qabyaalada ,majeerteen maxaa idinku diray.
Dhulbaahanta waa dad wanagsan laakin khaatumo waxay ku khaatumaysanaysa khaatumo xumo